Zavatra tokony hatao ao Norman
Mandany fotoana ve ianao any Norman, Oklahoma? Angamba ianao niditra tao an-tanàna mba hijery lalao Oklahoma Longers ary mitady zavatra mahafinaritra hatao raha mbola eto ianao. Eny ary, lisitr'ireo mpitsidika mahaliana sy mahaliana an'i Norman ihany.
Raha mbola tsy tany an-tanàn-dehibe ianao mba hijery hetsika fanatanjahan-tena any Oklahoma, nahoana raha mihevitra ny iray. Ny ho avy dia ny baolina kitra no lehibe indrindra, mazava ho azy, ary ny rehetra dia tokony hijery ny Heisman Park hahita ny sarivongana. Saingy aza adino ny momba ny basketball, ny lehilahy sy ny vehivavy, ary ny hetsika hafa rehetra mahafinaritra an'ny OU.
Ny Tranombakok'i Sam Noble Oklahoma momba ny tantaran'ny natiora ao amin'ny oniversite an'i Oklahoma (2401 Chautauqua Avenue) dia tsy iray amin'ireo zavatra ambony tokony hataon'i Norman; Io no iray amin'ny tsara indrindra any Oklahoma City . Manana sehatra fito, fampisehoana interactifs sy fôsily avy any Oklahoma sy manerana izao tontolo izao, izy io dia manana sehatra enina tapitrisa ao amin'ny sehatra famoriam-bola roa ambin'ny folo ary iray amin'ireo tranombakoka lehibe indrindra eran-tany momba ny tantaran'ny natiora voajanahary. Ny tranombakoka dia manolotra lahateny, fampisehoana, fitsangatsanganana an-kalamanjana, alim-borona, fandaharam-pianaran'ny ankizy ary atrikasa lehibe.
Ny faritra Norman dia manana safidy roa tsara ho an'ny gaming kino. Ny fonosana Thunderwell Shawnee ao Oklahoma no miasa ao amin'ny Thunderbird Casino (15700 East Hwy 9), iray amin'ireo tranainy indrindra any Amerika Latina. Mifanohitra amin'izany, ny River River Casino dia iray amin'ireo vaovao sy lehibe indrindra. Tsy vitan'ny hoe samy manana ny sariny, ny trano fisakafoanana na ny lalao latabatra ny Vegas, fa ny River River indrindra no toerana tsara hanaovana mozika mivantana . Ny The Showplace Theater dia ahitana fombafomba, komandy ary maro hafa fanta-daza.
Joel Sheagren / Getty Images
Any amin'ny faritra atsinanan'i Norman eo amin'ny Highway 9, ny Lake Thunderbird dia manome karazana fanatanjahantena hafakely ho atao, ny zava-drehetra avy amin'ny sambo, ny filomanosana sy ny toerana fitobiana, ny fitsangatsanganana, ny fandrobana ary ny maro kokoa. Afaka mankafy ny kianja filalaovana ny ankizy, ary ny olon-dehibe dia afaka mitsidika ireo seranana sy ny foibe natiora.
Niorina tamin'ny taona 1936 ny Museum of Art (University of Oklahoma) ao amin'ny Oniversiten'i Oklahoma (555 Elm Avenue), toerana mahafinaritra izay ahitana karazana asa be dia be misy amin'ny zavakanto Amerikana, Indianina, Azia, Atao ary Eoropeana, ary koa sary. Fandraisana malalaka ny fidirana. Ny tranom-bakoka dia manana tanjona 12.000 ao anatin'ny tahiry maharitra, ary koa ny fandaharam-pampianarana sy fandaharanasa ho an'ny mpianatra sy ny mpianatra tsy mitovy. Ankoatr'izany, misy toerana sy trano fandraisam-bahiny sy tranom-bahiny ao amin'ny tranom-bakoka azo alaina. Miankina amin'ny toerana dia afaka omena toerana maimaim-poana mihoatra ny 200 ireo hetsika manokana, ary misy trano fisakafoanana maotera.
Oklahoma dia fantatra hatrany amin'ny toeran'ny toerana mahaliana indrindra amin'ny firenena. Nantsoinay mihitsy aza ny ekipanay NBA ny Thunder , na izany aza. Ary Norman, Oklahoma dia lasa haingam-pirenena ao amin'ny meteorology. Ny National Weather Center dia tsy manome seha-seminera fotsiny ho an'ny olona mahavariana ny toetrandro, fa ny zavatra iray manokana sy mahafinaritra atao any Norman dia ny iray amin'ireo fitsidihana ora iray ao an-toerana izay mitsidika ny deck deck sy ny laboratoires.
Ny orinasa lehibe indrindra sy malaza indrindra amin'ny valan-tanàna ao Norman, Westwood dia miorina eo amin'ny 24 atsimo andrefan'i Robinson ary Robinson. Izy io dia misy kianja golf misy lavaka 18, lakandrano sy dobo, kianja fanaovana tennis ary maro hafa.
Ny Park Fun Andy Alligator
Ny Park Fun ao Norman Alligator ao Norman dia tena tsara ho an'ny antoko fankalazana ny ankizy, fa zavatra mahafinaritra ihany koa ho antsika "ankizy" amin'ny vanim-potoana rehetra. Manaova fipoahana amin'ny go-karts, mini-golf, fiara mitam-piadiana na sambo baomba, manandrana vato mitaingina, manapotipotika cages na bowling, na milalao lalao video ary misakafo amin'ny pizza na subs avy amin'ny cafe. Tamin'ny taona 2012, nampidirin'ny tranobe iray ihany koa ny valan-drano. Eo amin'ny manodidina dimy eo ho eo, dia misy rindran-tsavony miisa 45 metatra, rantsan-tongotra efatra an-tongotra, ravin-tsambo 400 hakiho, riaka lava lava be, rafitra fananganana rano ary faritra fanjonoana ho an'ny ankizy madinika.
Iray amin'ireo toeram-pivarotana tsara indrindra ao Oklahoma City ny fivarotana lehibe indostrialy ao Oklahoma City, Normaner Attraction ny tenany. Maro ireo fivarotana, avy amin'ny famandrihana amin'ny anarana lehibe toy ny Sears sy JC Penney, ary ny kianja hanina dia manana karazan-tsakafo tianao indrindra. Manana toerana ho an'ny ankizy koa ny Sooner Mall, ary ny fivarotana Hot Topic dia manasongadina fampisehoana mivantana.
Ny fomba fametrahana ny hetran'ny Oklahoma ny hetra
Oklahoma Water Parks sy Theme Parks
Vidio ireo vokatra natao tany Oklahoma
5 Oklahoma RV Parks mila mitsidika
Oklahoma Lottery Ticket Guide
Ny Dia Trips Tsara Indrindra avy any Helsinki, Finlande
Golf sy Family Fun ao amin'ny Resort Reunion any Orlando
Ny tsara indrindra any Etazonia
San Andres, Kolombia
Ny Waterskiing Santa 2017
Miaro ny tenanao amin'ny moka
Zava-mahaliana momba an'i Brezila
Ireo Top 5 Spots momba Dining ao amin'ny Orlando Universal
Moa ve ny Lakandranon'i Brooklyn Miantsena na Voasakana Androany? BKLYN Bridge Construction
Mialà amin'izao fotoana izao: Fiambenana fiaramanidina maoderina
Top Attractions at Portland Oregon
7 tsara indrindra any Amerika Atsimo